safarka Archive | Save A tareenka
Waqtiga Akhriska: 7 daqiiqo Buuraha dhaadheer ee neefta leh, dooxooyinka ubaxaya, biyo-dhacyo, harooyinka, iyo duurjoogta kaladuwan, Hoyga Yurub ee kaydka dabeecadaha adduunka ugu lama-ilawsiga ah. Kharash bixinta guud ahaan dalal cagaaran oo aad ubaxaa xilliga guga, 5 kaydka dabiiciga ee ugu quruxda badan Yurub waa seerayaal qaran oo la ilaaliyo oo soo dhoweeya socdaalka…
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo Waqtiga ayaa ugu dambeyntii yimaado – haddii aad hadda jaamacad ka qalin jabiyay, waxaa cinwaan maqnaan aad fasaxa sannadlaha ah, ama go'aansaday in jaceylka ee safarka, dhulkiinnu midho ma lagu waayi karaa, aad dooratay in ay u safraan Europe tareen. Waa fikrad ka taataabtay, socod ku soo maray…
Waqtiga Akhriska: 4 daqiiqo Safarada Maalinta Qiimeynta-Sare Si Looga Qaado Berlin waa waajib inkasta oo Berlin lafteedu ay tahay meel aad ufiican oo la booqdo! Waxaa jira jiidashada weyn oo ku filan in caasimada Germany in ay sii aad degan maalmo. Si kastaba ha ahaatee, safarada maalinlaha ah ee ka yimaada Berlin ilaa magaalooyinka deriska ah iyo baadiyaha…